I-China Juda Kiln-Inner Mongolia 300T/D×3 ihambelana nokusingqongileyo imigca yemveliso yekalika ekalika umzi-mveliso kunye nabavelisi | Yuda
Iiparamitha zobugcisa kunye netafile yokusebenza
Iimfuno zesalathisi selitye likalika
Ubungakanani obufanayo kunye nococeko
Akukho mgubo wamatye, akukho daka lutyheli kumphezulu wamatye
Iimfuno zesalathiso samalahle
Ixabiso leCalorifi elipheleleyo
Akukho lahle lomgubo
Imigangatho yobulunga bekalika
1, Umthamo wemveliso oyilwe yi-100-300 yeetoni zekalika ekhawulezayo ngosuku. Idayamitha ye-kiln body ikhethwa ukuba yi-4.0 -6.0meters, i-diameter yangaphandle yi-6.5 -8.5meters, ukuphakama okusebenzayo komzimba we-kiln yi-30-33 yeemitha kunye nobude obupheleleyo yi-38-45meters.
I-2, i-limestone eluhlaza kunye namalahle avela kwimigodi ekufutshane kunye nemigodi enokunciphisa iindleko zokuhamba.
3, Ubungakanani besuntswana lelitye: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4 、 Ilitye kunye namalahle zilinganiswa ngokuchanekileyo ngokulinganisa izinzwa.
5, Izinto ezichasayo kwesi sikimu ngumaleko omnye we-firebrick + enye yezitena ezibomvu + enye i-aluminium silicate fiber ivakalelwa + i-slag yamanzi.
6, Uthuli kunye nomsi oqulethe uthuli lwamkela inkqubo yokususa uthuli lomqokeleli wothuli lwenkanyamba + umqokeleli wothuli wengxowa + yokuqokelela uthuli lwamanzi ifilimu desulphurization. Emva kokunyanga, uthuli lukhutshwa ngokuhambelana ngokungqongqo nemigangatho yokwamkelwa kwendawo.
7.Uhlahlo lwabiwo-mali lusukela kwi-batching emele (ukuqala) ukuya lmna ibhanti lokukhupha (ukuyeka), ngaphandle kwesiseko se-kiln, isiseko se-batching kunye negumbi lokulawula umbane
Inkqubo yeBatcher: ilitye kunye namalahle ahanjiswa ngokulandelelanayo ukuya kwi-emele ye-cache yelitye kunye namalahle ngamabhanti;
Inkqubo yokutya: ilitye kunye namalahle agcinwe kwibhanti edibeneyo ihanjiswa kwi-hopper, eqhutywa yi-winder ukwenza i-hopper ijikeleze phezulu nangaphantsi ukuze idle, ephucula umthamo wokuthutha kwaye iphumelele ukusebenza kakuhle kunye nokugcinwa kwamandla.
Inkqubo yokusasaza: umxube welitye kunye namalahle ufakwa kwi-buffer hopper nge-feeder nakwi-rotary feeder. Umxube utyiswa ngokulinganayo kwindawo ephezulu ye-kiln ngokusebenzisa i-multi-point rotary feeder.
Inkqubo yokukhutshwa kwekalika: emva kokuba ilitye lekalika elipholileyo lipholile, i-lime egqityiweyo ikhutshelwa kwibhanti yokukhupha i-lime ngomatshini wokuthulula wamacala amane kunye namacandelo amabini evalve yokuvala umoya. Kwimeko yokudubula, isalathiso kunye nesixa sokuchithwa kwekalika sinokuhlengahlengiswa ukuze kufezekiswe ukudubula kunye nokutsalwa okungundoqo.
Inkqubo yokususa uthuli: emva kwedrafti yedrafti eyenziwe, uthuli oluqulethe umsi kunye negesi kuqala ngokusebenzisa umqokeleli wothuli lwe-cyclone ukususa amasuntswana amakhulu othuli; Emva koko kwisikhwama sokucoca ukususa amaqhekeza amancinci othuli; Emva kokungena kwi-precipitator yefilimu yamanzi, i-flue. Irhasi iya kuxubha kwifilimu yamanzi ngalo lonke ixesha, kwaye umsi othulile uya kumanziswa. Iya kungena ngaphantsi kwe-dust precipitator kunye nokuhamba kwamanzi kwaye ikhutshwe kwi-tank ye-sedimentation. Emva kwemvula, amanzi acocekileyo aya kuphinda asetyenziswe.
Inkqubo yokulawula yombane: ukwamkela inkqubo yokulawula ikhompyuter ye-Siemens yaseJamani, umgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo, ukonga iindleko, umgangatho wemveliso ozinzile.
Ngaphambili: I-Juda kiln -300T / D umgca wokuvelisa -iprojekthi ye-EPC
Okulandelayo: I-Juda kiln -200T / D imigca ye-3 yokuvelisa -iprojekthi ye-EPC
Ukwenza iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium oxide Production Line, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing,